थ्रिस्टार र पुलिसको फाईनलमा दुर्लभ भेट ,कस्ले उचाल्ला उपाधी ? – Peacepokhara.com
थ्रिस्टार र पुलिसको फाईनलमा दुर्लभ भेट ,कस्ले उचाल्ला उपाधी ?
१६ औँ सस्ंकरणको आहा रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको फाईनलमा शनिवार थ्रिस्टार क्लव र विभागिय टोली नेपाल पुलिस क्लव आमने सामने हुँदैछन् ।
१६ औँ संस्करण सम्म आईपुग्दा फाईनल खेलमा थ्रिस्टार र पुलिस पहिलोपटक भिड्ने भएकोले पनि खेल रोचक हुने विश्वास गरिएको छ ।
थ्रिस्टारले वंगलादेशको वरिन्धरालाई सेमीफाईनलमा ५–० गोल अन्तरले पराजित गरेर फाईन प्रवेश गरेको हो भने नेपाल पुलिस क्लवले धरान फुटवल एफसिलाई १–० गोलले पराजित गरेर फाईनमा स्थान पक्का गरेको थियो ।
पोखरा रंगशालामा हुने फाईनल खेलमा दुवै टोली उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने छन् । दुवै टोलीका प्रशिक्षक तथा टिम क्याप्टेनले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन् । क्याराभान गोल्डकप सहित पुलिसलृ ५ पटक उपाधि उचालिसकेको छ । २०५८ को क्याराभान गोल्डकप, २०५९, २०६४, २०६५ र २०६६ को संस्करणको आहारारा गोल्डकप पुलिसले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । रोचक त के छ भने २०६६ मा उपाधि जितेपछि पुलिस टिम पहिलोपटक फाईनल प्रवेश गरेको छ ।
नेपाली फुटवलको पावर हाउस थ्रिस्टार क्लवले आहा रारामा ४ पटक उपाधि उचालि सकेको छ । २०६३, २०६७, २०६९ र २०७१ मा थ्रिस्टार च्याम्पियन वनेको छ ।
थ्रिस्टार फाईनलमा हारेको रेकर्ड अहिलेसम्म छैन, जसले गर्दा पनि १६ औँ संस्करणमा पनि उ जितको लागि खेल्नेछ ।
राष्ट्रिय र चर्चित खेलाडी नभएपनि पुलिसका मध्यमस्तरका खेलाडीले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । क्वाटरफाईनलमा मनाङ जस्तो वलियो टिमलाई हराएकोले पुलिस थ्रिस्टारसँग फाईनलमा उच्च मनोवलका साथ मैदानमा उत्रिने छ ।
एन्फासँगको विवादका कारण डेढ वर्ष जति फुटवलवाट वाहिरिएको थ्रिस्टार क्लवले गत साता ईटहरीमा सम्पन्न भएको मोफसलको सर्वाधिक राशीको उपाधि जितेर सुखद पुनरागमन गरेको छ । पुलिस टिमलाई हराएमा एक सातामा थ्रिस्टारले दोस्रो उपाधि भित्राउने छ । थ्रिस्टार आफ्नो जितको लयलाई पोखरामा पनि कायम गर्न चाहन्छ । वर्क प्रमिटका कारण क्वाटरफाईनलमा विदेशी खेलाडी खेलाउन नपाएको थ्रिस्टारले फाईनलमा दुई विदेशी खेलाडीहरु खेलाउदै छ ।
थ्रिस्टारका प्रशिक्षक मेघराज केसी आफुहरु जितकै लागि मैदानमा उत्रिने वताउँछन ्। टिम वर्क र अनुभव आफ्नो टिमको जितको आधार भएको केसीको भनाई छ ।
पुलिस टिमका प्रशिक्षक अनन्त थापाले फाईनल खेलमा दुवै टोलीको ५०÷५० को सम्भावना हुने हुँदा अघिल्ला खेलहरुमा जस्तै आफ्नो गाईडलाईन अनुसारनै खेलाडीहरुले खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । पुलिस टिमले विस्तारै लय समातेकोले पनि जित्ने विश्वास उनको छ ।
प्रतियोगिताको विजेता टिमलाई ७ लाख १ हजार नगद, शिल्ड, मेडल र प्रमाण–पत्र, तथा उप विजेता टिमलाई रु. ३ लाख ५१ हजार नगद, शिल्ड, मेडल र प्रमाण–पत्र पाउने छ । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई १ थान हिरो ड्यास स्कुटर प्रदान गरिनेछ । वेष्ट अफ फाईफ विधामा प्रत्येकलाई जनही नगद १५ हजार ट्रफि र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिनेछ ।
नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणमा ग्रीनेड विस्फोट,पाँच सैनिक घाइते
peacepokhara 02 Feb 2018
peacepokhara 22 Jun 2015
सिक्लेसमा शान्ति स्मारक बन्यो, प्रचण्डले अनावरण गर्ने
Krishna Dawadi 06 Dec 2018